Guri Smart - Smart Home Xiaomi HomeKit by Aqara! Dib u eegista lagu sameeyay Aqara Hub - SmartMe
Xiaomi Smart Home by Aqara! Dib-u-eegida dejinta ee ka socota Aqara Hub
Aqar, xiaomi smart home
Halyeey kastaa wuxuu leeyahay bilowgiisa. Haddaad la yaabban tahay markii guri caqli gal ah ku soo jiitay markii ugu horeysay, maxaad ka jawaabi doontaa? Arrinteyda waxay noqon doontaa goobta furitaanka filimka "Dib ugu noqo Mustaqbalka." Goormaadse ku bilaawday khibradaada guri caqli badan? Goorma ayaa guri caqli leh oo ka buuxa dareemayaal iyo aalado ay adiga wax kuu noqdeen, Thanks taas oo noloshaadu u fududaanayso oo raaxayso? Waxaan ku bilaabay markaan ka soo saaray xidhmo dhan sanduuqyo laga soo qaaday Aqara oo laga soo qaaday Xiaomi waxaanan naftayda ku idhi: bal aynu bilowno!
Hagaag, laakiin aan dib ugu noqonno hal tallaabo, sababta oo ah qofkasta uma baahna inuu ogaado waxa Aqara ama Aqara Hub yahay. Tani waa sheyga 'Xiaomi sub-brand', oo loo hibeeyay guriga caqliga leh, kaas oo ah inuu lahaado xitaa tayo ka sarreysa alaabooyinka Xiaomi. Waa mid aad u caan ah oo ka dambeysa darbiga weyn, oo sidoo kale dhawaan si rasmi ah uga dhex muuqday Yurub. Aaladaha samaysmaya Aqara Hub waxay sameeyaan xarun talis oo caqli gal ah.
Dib-u-eegista maanta, waxaan kula tacaali doonaa qalabka ugu yar ee caqliga leh ee guriga kaas oo aan kula talinayo qofkasta oo bilaaba in uu caqli galiyo gurigiisa. Xirmada waxaa ku jira aaladaha soo socda ee ka sameysan tikniyoolajiyada hoyga ah:
Hadafka Aqara Hub.
Albaabka iyo qalabka furitaanka daaqadda.
Oo taa waxaa sii dheer heerkulka heerkulka iyo huurka.
Aniga ahaan, alaabooyinkan alaabooyinka caqliga leh waxay aasaas u yihiin guri aamin ah waxayna hagaan ujeeddada guri caqli leh qof walba. Iyo ka sokow, oo leh set this qiimaha saamiga-qiimaha waa loo adkeysan karin.
Xiaomi smart home - aragti ugu horeysay
Mid kasta oo ka mid ah alaabada Alaara si wanaagsan ayaa loo sameeyay oo loo sameeyay. Sanduuqa dhexdiisa waxaad had iyo jeer ka heli doontaa shey leh tilmaamo kaa caawin doona inaad ku shaqeyso oo aad ku rakibatid barnaamijyada Xiaomi iyo aalado dhibaato la'aan. Xaaladeyda, waxay ahayd Buug-gacmeed ku qoran Shiinaha, laakiin waxaad ku heli doontaa tilmaamaha Ingiriisiga ama xitaa Polish.
Albaabka leh dareemayaasha waxaa lagu hayaa kaladuwanaanta midabka ee badeecada Xiaomi inteeda badan, i.e. white. Albaabka iyo qalabka qaaca sheega waa weyn yahay, halka dareemayaasha albaabada / daaqadaha, daadadka iyo heerkulka ay aad u yaraayeen. Badanaa waad ka heli kartaa iyaga oo isku dhafan midabyo xoog leh (sida cad on madow) ama qoryo. Waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan.
Qalabka furaha albaabka iyo daaqadda ayaa ah midka keliya ee ka kooban laba qaybood - mid yar iyo xagal weyn. Marka la soo koobo, tiro ka mid ah aaladaha caqliga leh ee wax ka qabta howlaha aasaasiga ah ee guriga ayaa u muuqda mid casri ah oo soo jiidasho leh.
Fureynta iyo iskugeynta aaladaha Aqara
Isku-habeynta guriga Xiaomi ee caqliga leh ee ku saleysan alaabada Aqara waxaa lagu sameeyaa laba heer. Marka hore waxaad ku daraysaa albaabka Aqara Hub, ka dibna dareemayaal shaqsiyeed. Sababta oo ah inay tahay waxoogaa madadaalo ah, waxaan u abuurnay hage khaas ah oo aad ka heli doontid halkan. Waxay ku jirtaa labadaba sharraxaad loogu talagalay MiHome iyo dhexgalka dalabka Apple Home (Apple HomeKit). Waad ku mahadsan tahay, waxaad baran doontaa sida loo bilaabo isticmaalka teknoolojiyadda guriga ee Xiaomi smart.
Aqara Hub ka Xiaomi
Soosaarka Aqara, oo aannan ku bilaabin doonin ugaarsiga guri caqli badan, waa Aqara Hub, i.e. laad Goal. Albaabka waxaa loo habeeyay inuu ku xiro qalab dheeri ah oo u oggolaado koontaroolkiisa fog wifi. Waxaan ku soo lifaaqaynaa dareemayaal dheeri ah ama kontaroolo meeshaas (Dib u eegista Aqara Relay goor dhow) Waa in lagu xiraa marwalba oo waa inuu ahaadaa guriga dhexdiisana ku ag dhaw yahay mootada.
Faa'iido aad u weyn iyo farqiga ugu weyn marka loo eego Xiaomi Hub waa taageero loogu talagalay Apple HomeKit. Taas macnaheedu waa in albaabka laftiisa iyo dhamaan aaladaha aan ku xirno ay si toos ah ugu xirmi karaan codsiga Home ee ku saabsan aaladda Apple. In kasta oo aan aad u jecelahay MiHome, wali waxaan u maareeyaa gurigeyga caqliga badan si ka fiican anigoo caawinaya Home. Qaybta dambe ee faallooyinka waxaan si faahfaahsan ugu sharixi doonaa.
Aqara Hub ka Xiaomi kaliya maahan hadaf. Faa'iido kale oo weyn waa shaqada qaylo dhaanta. Albaabku wuxuu leeyahay qaylo dhaan leh oo haddii aan ku xirno dareemayaal qaab qeylo-dhaan ah, wey qaylinayaa markay xaalad degdeg ahi jirto. Albaabka waxaan ka heli doonnaa batoon aan ku damin karno ama bakhtiin karno qaylada, inkasta oo aan si otomaatig ah ugu sameyn doonno ama mid ka mid ah labada dalab midkood. Dareemayaasha dhaqdhaqaaqa waxay ka dhigayaan guriga caqliga badan inuu ilaaliyo badbaadada xubnaha reerka.
Hawsha albaabka u dambeysa waa laambad. Qalabka digniinta ka sokow, albaabku wuxuu leeyahay laambad ilays u ifaysa cas, markay seenyaaladu dhacdo. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida laambad habeenkii iyadoo lala xiriirinayo qalabka dareemayaasha dhaqdhaqaaqa.
Hal hadaf waa xulashooyin badan.
Albaabka iyo qalabka furitaanka daaqadda
Sheegaha aasaasiga ah ee salka ku haya kaas oo aan ku bilaabi karno dhisitaanka alaarmiga gurigeenna gudaheeda ee tikniyoolajiyada 'homeia' ee 'Xiaomi technology' waa dareemeha furitaanka. Mabda'a hawlgalku waa sida soo socota: qalabka dareemayaashu wuxuu ka kooban yahay laba arrimood oo ay tahay inay midba midka kale aad ugu dhowaado. Mid wuxuu ku dhegan yahay shey la dhaqaajin karo, kan kalena wuxuu ku socdaa mid joogto ah, tusaale ahaan, albaab iyo xirmadiisa. Haddii xiriirka ka dhexeeya dareemayaashu uu jabo, tusaale ahaan, markii albaabku furan yahay, markaa dareemahu wuxuu ogaanayaa inay furan yihiin. Haddii aan ugu darno qolalka ku habboon, waxaan si rasmi ah u ogaan doonnaa halka isbedelku ka dhacay.
Dareemayaasha waxaa lagu dhejiyaa iyaga oo ku dhejinaya cajaladda dhabarka. Inta lagu gudajiro rakibaadda, dalabka ayaa noo soo sheegi doona wixii ku saabsan in dareemayaashu u dhow yihiin ama inaan weli u baahanahay inaan u soo dhoweyno Xusuusnow in masaafada ay runtii aad u yar tahay - waa dhowr milimitir oo keliya. Ka dib marka lagu daro dareemayaasha albaabka, waxay si toos ah uga dhex muuqan doontaa MiHome Xiaomi iyo Apple House.
Qalabka shey laftiisa malahan qaabeyn badan, laakiin waxaa loo isticmaali karaa qalabayn badan:
Otomaatiga aasaasiga ah waa ogeysiisyo taleefan oo soo socda oo ah in mid ka mid ah dareemayaasha uu ogaaday furitaanka albaabada ama daaqadaha. Waad dooran kartaa inaad tan sameyso markasta ama kaliya markaad guriga ka maqantahay. Tani aad ayey faa'iido u leedahay marka aadan xusuusan karin inaad daaqad xirtay ama albaab. Waad shidaa arjiga wax walbana waa cad yihiin.
Qalabka kale ee iswada waa shaqada qaylo dhaanta. Waxaan tilmaami karnaa in furitaanka albaabbada iyo dariishadaha ay kiciyaan alaarmiga. Haddii mid ka mid ah dareemayaashu uu ogaado furitaanka marka qaylo-dhaantu ay dhacdo, Albaabku wuxuu bilaabi doonaa inuu ooyo oo uu casaan dhalaaliyo, waxaanna ka heli doonnaa ogeysiiska taleefanka ku saabsan alaarmiga. Waxaan u diyaarin karnaa ka mid ahaanshihiisa saacado gaar ah ama iyadoo lagu saleynayo mowqifkeenna markaan ka guureyno ama u dhowaanno guriga.
Waxaan kaloo dhisi karnaa qalab kale oo otomaatig ah oo kiciya dareemayaasha. Tusaale ahaan, markaan furno albaabka laga soo galo, indhoolayaasha ayaa qarin doona ama nalalka hoolka ayaa soo galaya.
Tilmaamo tillaabo otomaatig ah oo ah guri caqli leh ayaa laga heli karaa hageheena.
Dareemka daadadka ayaa badbaadiyay gurigeyga seddex jeer hadda kanina waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu wanaagsanaa ee aan soo iibsaday. Dareemuhu wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah kan aan kor ku soo sheegnay. Markay wax ogaato (xaaladdan oo kale, markay qoyso), waxay markiiba u dirtaa macluumaadka albaabka waxayna bilaabaysaa cabaad. Albaabka ayaa markaa si otomaatig ah u galaya habka digniinta (ha ahaado ama ha shidan) iyo sidoo kale wuxuu bilaabaa inuu qayliyo oo uu dhalaalayo casaan. Waxaan sidoo kale helnaa ogeysiis taleefanka ah oo leh macluumaadka meesha la ogaaday in ay soo baxday.
Sheekada nolosha dhabta ah waa adeegsiga dareemahan laba maalmood ka dib rakibidda. Waxaan ku soo galnay guriga oo aan si fudud u rakibannay dhammaan qalabka guryaha. Waxaan horay u haystay laba dareemayaal daad ah, oo aan ag dhigay mishiinka dharka dhaqa iyo hoostiisa, oo labadaba jikada ku dhex yaal. Mid ka mid ah fiidkii, markii aan daawanaynaynay telefishanka, ayaa si lama filaan ah qaylo iyo qaylo-dhaan daadadku bilaabeen, qaylada ayaa noqotay mid cabsi leh oo afadayda iyo anigu wax fikir ah kama haysto waxa socda. Si dhaqso ah ayaan gacanta ugu qabtay taleefoonkeyga gacanta waxaanan eegay ogeysiinta ah in Xiaomi Smart Home ay ku soo daadatay wasaqda dharka. Mashiinka dharka lagu dhaqo waxaa lagu dhisaa jikada hoostiisa hoostoodana waxaa ku yaal xarig leh shaabad aan biyuhu ka imaan karin. Ka dib markii ay ka saareen xarig wax ku ool ah ayaa nagu fatahay. Waxaa soo baxday in tuubada mashiinka dharka dhaqa ay soo dhacday wax walbana waxay bilaabeen daad. Waxay qaadatay dhowr maalmood si loo qalajiyo alaabta guriga iyo sagxadda, laakiin haddii aysan ahaan laheyn qalabka dareemayaasha ee loo yaqaan 'PLN 30', waligeen kuma ogaan laheyn arrintaas, maxaa yeelay xariiqda biyaha waxay ka ilaalinaysaa inay biyuhu daadiyaan, waxaana suuragal ah inaan burburinno alaabada cusub ee jikada iyo dabaqa. Markii dambe, waxaa soo daatay laba jeer oo dheeraad ah (mar kale tuubbada ka soo baxday mashiinka dharka dhaqa iyo makiinada weelka lagu dhaqo), laakiin markaa waxaan ogaannay halka aan ku ordi karno si aan u joojinno isla markiiba.
Sheekadan kadib, waxaan soo iibsaday laba dareemayaal dheeri ah oo aan dhigay meelo kale oo biyo laga heli karo. Dabacsanaanta ay dammaanad qaadday Xiaomi homekit waa faa'iido muhiim ah.
Qalabka dabka ka baaraandega wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah dhammaan qalabka kale ee aaladda qiiq ka baxda. Waxaan ku rakibnay saqafka u dhow meel uu dab ka kici karo (marka 95% kiisaska waa jikada). Goobaha dareemayaasha, waxaan ku qeexi karnaa nooca meesha ay ku taallo: haddii ay ahaan lahayd, tusaale ahaan, bakhaar, halkaas oo ay tahay inuu noqdo mid aad xasaasi u ah, ama jikada, halkaas oo ay ka jirto fursad weyn oo digniin been ah.
Qaabka isku-xidhka ayaa lamid ah dareemayaasha kale, i.e. waxay ogaataa hanjabaad (kiiskan qiiqa) oo wuxuu sameeyaa firfircooni gudaha, qeylo badan, iyo sidoo kale qaylo-dhaan ku taal Xiaomi Aqara Hub irridda iyo ogeysiinta taleefanka. Illaa iyo hadda, qalabka dareemahu wuxuu shaqada ka eryay hal mar markay xaasku casho sameyneyso. Sidaa darteed, waa dareemaye uusan isagu aad u jeclayn ????
Dareenka dhaqdhaqaaqa wuxuu kaga duwan yahay waxyaabaha kale ee Aqary. Waxa ugu horreeya ee indhaha qabsada waa cabbirkiisu yar yahay. Jaranjarooyinka ama maqaayadaha waxaa loo isticmaalaa dareemayaal cabirka ballaaran ee gacanta. Aaladaha ka imanaya Aqara aad ayuu uga yar yahay, marka waxaan ku qarin karnaa meel kasta. Dareemaha waxaa lagu dalban karaa kaligiis ama lug. Cagtu waxay noo oggolaaneysaa inaan dhaqaajinno aaladda oo aan u dhigno xisaab aan caadi aheyn. Markaa, waanu geli karnaa, ama waxaan ku dhejin karnaa derbiga ama saqafka. Suurtagalnimada halkan kama dhammaan karaan.
Ka dib markaan ku xidho qalabka dareenka albaabka, waxaan adeegsan karnaa awooddeeda buuxda muddo kadib. Waxaa loo isticmaali karaa inay tahay shey dheeraad ah oo amniga ah iyadoo la ogaanayo dhaqdhaqaaqa guriga markii aan baxnay waxay kicin kartaa qaylo dhaan. Waxaan sidoo kale ku saleysan karnaa qalab otomaatik ah sida iftiinka laambada markaan qolka soo galno tilmaan muujineysa in la sameeyo habeenkii oo keliya. Daaruhu waa mid qaali ah laakiin faa iido u leh nidaamkayaga Aqara.
Dareemuhu wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale in aanu ka tirsanayn qaybta badbaadada, laakiin uu yahay qaybta ku habboonaanta. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay qaabab aad u yar oo ay ku yeelan karto dib-u-eegis u heellan, sidaa darteed halkan ayaan ku soo daray. Sida magaca ka muuqata, waxay ogaataa heerkulka iyo huurka qolka la siiyay. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale muujineysaa cadaadis, laakiin kuma jirto hectopascals, laakiin kilopascals - kaliya ku dar hal eber wax walbana way cadaanayaan. Shaqooyinkaas ka sokow, dareemuhu wuxuu kaloo na tusayaa in heerkulka qolka la siiyay uu yahay midka ugu habboon (beer cagaaran) iyo in kale.
Aaladda lafteeda ayaa na siisa macluumaad aasaasi ah oo keliya oo ku saabsan cimilada, laakiin suurtagalnimada in loo adeegsado otomaatig ahaan ayaa aad u ballaaran. Waxaan kuxiran karnaa qeyb kamid ah qalabkeena guriga ee caqliga leh ee Xiaomi kuna saleysan heerkulka ama qoyaan, tusaale ahaan.
Bilaabidda qaboojiyaha haddii heerkulku gaaro dhowr digrii.
Bilaabidda huuriyeyaasha hawada haddii hawadu leedahay qoyaan yar.
Hoos u dhig indhoolayaasha marka heerkulku kor u kaco, ama kor u qaad marka ay hooseyso.
Runtii fursado badan ayaa jira oo waxaan dhamaanteen ku tusi doonnaa qeybta tababarka.
Codsiyada Aqara - MiHome iyo Apple House
Anagoo ogaanaya sida dhamaan aaladaha caqliga leh ee guriga u shaqeeyaan, waxaan u tagi karnaa labo dalab oo waaweyn, kuwaas oo kala ah MiHome oo ka socda Xiaomi iyo Apple Dom. Sidii aan hore u qoray, waxaan uga tagaa qaabeynta faahfaahsan ee tusahan, oo halkan waxaan ku sharxi doonaa waxa labada dalabba ay na siinayaan.
Ka dib markii lagu daro iridda MiHome oo lagu daro HomeKit, aaladda ugu horreysa ayaa soo muuqan doonta, ie Aqara Hub. Laga soo bilaabo heerka MiHome, shaashadda ugu horreysa waxay muujineysaa ikhtiyaarka ah in la bilaabo / la joojiyo qalabka digniinta iyo laambadda. Kadib waxaan haysannaa laba aragti oo dheeri ah - otomatiga iyo aaladaha. Aaladda otomaatiga ah, waxaan dhisnaa muuqaallo (hage), iyo aaladaha, waxaan ku dari karnaa dareemayaal dheeri ah (sidoo kale waa suurtogal in la mariyo menu-ka weyn ee MiHome). Xulashada albaabka, waxaan dejin karnaa qolka uu ku yaalo, mugga iyo dhawaqa alaarmiga (tusaale ahaan seeriga booliiska) iyo midabka nalka. Waxaan ku guuleystey inaan iridda dhigto saqbadhkii markii aan daaray dhawaqa alaarmiga, waxay ila yaabtay in albaabku muujiyey awooddiisa buuxda. Haa, derisku waa inay i caabudaan ...
Guriga Apple House, waxaan heysanaa xulashooyin ka yar. Ka dib marka aad ku darto albaabka HomeKit, aaladda ayaa ka soo muuqan doonta menu weyn. Way fiican tahay in magaca la beddelo oo lagu daro qolka ku habboon. Guriga Apple House, waxaan sidoo kale shidi karnaa / dami kara alaarmiga iyo nalka waxaanna ku sameyn karnaa isla qalabkii isla Xiaomi MiHome. Ikhtiyaarradu aad ayey uga yar yihiin, laakiin aniga way ii fududaan tahay inaan adeegsado codsigan.
Waxaan ku darnaa dareemayaasha furitaanka, daadadka, qiiqa iyo heerkulka adoo ku daray qalabka. Waxaan xasuusnaa inaan sifiican u qeexnay oo aan qolka u xilsaarnay, taas oo mahad leh taas oo aan ku ogaan doonno meesha wax laga arkay Codsiga Guriga dhexdiisa, maahan inaan wax uun qabanno si aan ugu soo bandhigno iyaga - irridda ayaa iyadu ku dari doonta lafteeda. Halkan waxaan sidoo kale ku sifeynaa iyaga oo u qoondeynay qolal. Ma jiraan fursado badan oo dheeri ah kiiskan.
Nolol maalmeedka Aqara
Haysashada qalab noocaas ah, waxaan horey u helnay Xiaomi Smart Home dhab ah. Waxaan u isticmaalaa si aan kala joogsi lahayn maalin kasta waxaanan dareemaa ammaan badan. Dabcan, tani ma ahan dhammaan qeylo-dhaanta PLN 2 oo ay la socdaan koox amni oo imaan doonta 15 daqiiqo, laakiin dhammaanteen ma ahan inaan u baahanno wax sidaas oo kale ah. Waxaan kula talinayaa dadka guri wada leh inay labaduba sameeyaan digniin caqli gal ah oo ay samaystaan ​​mid caadi ah - haddii ay dhacdo nasiib darro weyn.
Qalabka daadadka iyo qiiqa lagu baaro lama arki karo waana doorkooda. Kaliya waxaa la moodayaa inay ordaan markay wax dhacaan. Dareeraha albaabka iyo daaqadda ayaa i ogeysiinaya haddii wax walba xiran yihiin ama haddii aan wax illaabay oo aan u baahanahay inaan daaqadda xiro. Iyo dareeraha heerkulka maahan oo kaliya inuu i siiyo dhammaan xogta, laakiin sidoo kale wuxuu u muuqdaa mid aad ugu fiican qoryaha 😉
Marka laga reebo albaabka, dhammaan aaladaha waa kuwo ku shaqeeya batteri iyo fiilo la'aan. Intee in le’eg ayey ku sii noolaan karaan hal batari? Way adag tahay in la yiraahdo maxaa yeelay waxaan rakibay iyaga in ka badan nus sano ka hor, illaa haddana uma baahnin inaan ka walwalo beddelka batariga.
Haddii aad rabto inaad ku biloowdo khalqigaaga guri caqli leh guud ahaan ama Xiaomi Smart Home, waxaan kugula talinayaa inaad sameyso aalad Aqara oo gacan ku leh wadnahaaga. Kaliya hubi haddii kuwanu ay noqon doonaan aaladaha ugu dambeeyay boggayaga wax soo saarka. Qiimahoodu ficil ahaan waa isku mid, laakiin jiilka cusub wuxuu ku shaqeeyaa borotokoolka 'Zigbee 3.0', kaas oo u oggolaanaya isgaarsiinta ka wanaagsan, aalado badan iyo isticmaalka tamar yar.
Haddii aad ku biirto guri caqli-gal ah cutubyo xakameyn oo xun, oo aad darbiyada ku dhex foorarsato, fiilooyin jiidaya iyo sida loogu baahan yahay in la ogaado luuqadaha barnaamijyada, waan ku faraxsanahay inaan kuu sheego inay tani tahay wax la soo dhaafay! Hadda waxaan ku dhejineynaa aaladaha aqliga wanaagsan meesha aan dooneyno inay joogaan, ama halkaas uun dhig. Qalabka oo dhan macno ahaan waa dhowr guji, sidoo kale otomatiguna waa sidaas. Iyo halkii aad ku bixin laheyd dhowr ama xitaa dhowr kun oo zlotys, waxaad heli kartaa guri caqli badan, oo xiraya miisaaniyada qadarka ka hooseeya PLN 400. Halkii aad ka ahaan lahayd ciidan urursadayaal iyo waxdhisayaal, adigu waad sameyn kartaa ama waad caawin kartaa. Mana aha inaad sugto dhowr toddobaad taas, hal fiidnimo ayaa kugu filan.
Oo kani waa nooca guriga caqliga leh ee aan rabno inaan ku baahinno Poland. Guri caqli badan oo ah:
Halkan waxaa ah kii ugu horreeyay ee dib u eegisyo badan oo ku saabsan (dhowaan;)) Xariirka ugu weyn ee ku saabsan caqli-galnimada Poland.